Thuja waxaa iska leh qoyska qaawan. Geedkani waxa uu ka soo baxayaa (ama geed), oo leh taajajir cufan, wuxuu qurxin doonaa beer kasta oo guriga, xaafadaha magaalada ku yaal, barxad magaalada, iwm. Marka lagu daro taajka cagaarka leh, thuja aad kuugu farxi doonto carafkeeda, tan iyo alaabteeda waxa ku jira saliidaha lagama maarmaanka ah.
Quruxda ubaxyada ubaxu waa mid aad u kacsan in ay macquul tahay in la jeexo. Kala duwanaanta midabka iyo qaabka: mid ayaa ka heli kara labada baraf-cad oo ah baraf-cad ama midab-kareemo ah, iyo sidoo kale ubaxa casaanka ah iyo casaan-gaabka oo kale. Wixii peonies had iyo jeer isku day in aad ku qaadato meesha ugu fiican ee beerta.
Tilmaamaha iyo hababka loo isticmaalo xayawaanka ilaalinta cayayaanka
Cudurada qaboobaha iyo muuqaalka cayayaanka on dhirta si weyn u saameeyaan guryaha guud ee ubaxyada, iyo mararka qaarkood waxay keeni kartaa dhimasho dhamaystiran ee geedka. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la ogaado siyaabaha suurtagalka ah ee looga ilaalin karo qaboojinta ka soo cayayaanka. Sida loola macaamilayo lakabka Tani waxay u badan tahay in ay weeraraan duurka u koraya ee hooska.
Noocyada ugu waaweyn ee bergenia iyo sharaxaadda
Badan waa caleemaha dhirta dhirta qoyan ee qaraxa ah ee kamida xayawaanka. Magaca Laatiin Bergenia waxaa lagu sharfay Karl Augusta von Bergen - Jarmalka Jarmalka, Professor at University of Viadrin, oo loo yaqaan 'bergenia' oo caan ah. Magaca caanka ah waa Badyan. Ku xirnaanshaha noocyadan dhirta ah ee qoysaska dhirta dhagax-dhagxaanta horeba waxay soo jeedinayaan in dhul daaqsimeedka uu yahay goobta Bergenia.
Peony waa ubax uducsan oo indhaha noo furan May illaa dhammaadka Juun. Waddanku wuxuu ku yaalaa waqooyiga Ameerika iyo Eurasia. Cudurka Peony wuxuu ka kooban yahay 34 nooc, kuwaas oo loo qaybiyay 5,000 oo nooc. Isla mar ahaantaana, 4,500 waa nooca dabiiciga ah ee peonies iyo kaliya 500 nooc ayaa ah geed sida. Ma taqaanaa?
Goorta iyo sida loo abuuro berde, xeerarka daryeelka ubaxa
Maqaalkani waxaan kuu sheegi doonaa warshad noocan ah sida Badan. Waxaad baran doontaa waxa ubaxa Badan u taagan yahay, iyo sidoo kale inaad hesho macluumaad ku saabsan abuurista iyo daryeelida berrin furan. Sidoo kale, ma nooma jeedi doono sifooyinka dhalida ee warshad cayiman, xeerarka waraabinta iyo daryeelka. Ma taqaanaa?
Nolosha Live ee sariirta ubax, sida loo koro a delphinium on goobtaada
Delphinium ama bog waa mid aad u weyn beertaada. Bannaanka ayaa si fudud u adkaa. Duufaannada candhuufta ah ee xayawaanka ka sarreeya inta ka hartay noocyada, iyaga oo siinaya sharafka beerta iyo naqshadeynta. Ubax ee delphinium si fiican u dulqaadan labada abaarta iyo dhaxan. Burooyinka Terry ee foomamka xiiso leh iyo midabada ayaa marnaba ku siin doonaa caajisnimo beertaada.
10 noocyada ugu fiican ee delphinium leh sharaxaad
Delphinium ayaa magaceeda ku helay sababtoo ah qaabka aan caadiga ahayn ee ubaxa, taas oo ka fog fogtahay dad badan oo eey ku wada dabbaalanayaan. Inflorescences, gaaraya illaa laba mitir oo dherer ah, oo leh siyaalo kala duwan, ha ka tagin cid aan indho la'aan ah oo waligeed arkay ubaxyo leh delphiniums. Ma taqaanaa? Magaca kale ee delphinium waa baaxada.
Waa maxay faa'iido leh, qaababka daawada ee geedka?
Saxifrage, ubaxa hore, bergenia, shaah Mongolian ah, shaaha Chagir, beran waa magacyada dhammaan hal warshad. Waxay gaadhaysaa height ah 30-70 cm waxayna doorbideysaa meelo dabaysha oo dabaylo ah, waxay ku kori kartaa lakab kale oo baraf ah. Waxaad kula kulmi kartaa Siberia, China iyo Mongolia. Warshad Bergenia ah ayaa inta badan loo isticmaalaa daawada dhaqameed, maadaama ay hannaankeeda bogsashadu ay la tacaali karto calaamadaha cudurada kala duwan.
Sida loo abuuro ubax, gaar ahaan xannaanad furan
Lily waa ubax aad u qurux badan oo Liliaceae caan ah, oo ay ku jiraan geedo daaqsiin ah oo ka soo baxa nalalka. Lily waxay caan ku tahay noocyo kala duwan, midab jilicsan iyo foom yar oo tufaax ah. Ma taqaanaa? Lily waa ubax dhul furan. Si ay u muujiyaan dhammaan nimcadiisa iyo quruxdiisa, waxay u baahan tahay in la beero beerta.
Clematis waa warshad si fiican u eegi doonta qayb kasta oo beerta. Waa wax aan qabyo ahayn oo qabow u adkaysta. Dhirta Kuwani waa mid aad u qurux badan oo Bloom laga bilaabo June illaa September, taas oo aan ku farxi kartaa inuu bannaanka u. Dhibaatooyinkayagu waxay ku haboon yihiin noocyada badankooda, laakiin waxay ka fiican tahay in clematis lagu beero gobolka Moscow, waxaan kuu sheegi doonnaa dheeraad ah.
Jooji-aniga-ma aha: noocyada, degista iyo daryeelka
Noocyada iyo sharaxaada Forget-me-nots Forget-me-non (Myosotis) waa caleemo dhirta ka timaada qoyska battage (Boraginaceae). Ha iqin-aan-dheer-dheer, yar oo cabbirka iyo ubaxyo qurux yar. Cirbaddani waa tiro badan waxayna leedahay qiyaas ahaan 50 nooc oo dhirta. Ubaxa waa mid aad u caan ah waxaana uu ku baahsan yahay in laga helo dhamaanba adduunka, laga bilaabo Yurub ilaa Koonfur Afrika.
Sifooyinka gambaleelka jilicsan ee jilicsan
Bellflower (qaadka Campanula) waa caleemaha dhirta ugu caansan ee reerka Bellflower. Qoyska waxaa ku jira in ka badan afar boqol oo nooc oo soo kordhaya waddamada leh cimilada kulul. Qayliyaha ayaa ku kaca Caucasus, Siberia, Aasiya, Yurub, iyo sidoo kale Waqooyiga Ameerika. Inta badan qaababka dabiiciga ah ee guusha weyn waxaa ku kordhay dadka beeraha, maadaama ay tahay qurxiyo, jiilaal-adag iyo adigoon hoos u dhigin daryeelka.
Dahlia - ubax qurux badan oo dayrta
Ma aha wax for beertu waxay jecel yihiin in ay dhirta dahlias ku beeraan ubax, maxaa yeelay ubaxyadaasi waxay leeyihiin tiro aan la qiyaasi karin oo kala duwan. Noocyada kala duwan ee dahlias waxay ku kala duwan yihiin xuduudaha: dhererka dhererka, cabbirka iyo qaabka burooyinkeeda, habeynta tayada, xaaladaha koritaanka iyo daryeelka, iyo noocyada midabada. Wax yar oo ku saabsan midabada xilliga dayrta Magaca labaad ee ubaxa waa Dahlia, labadaba waxaa la siiyaa magacyada botanistaha: I.
Cineraria ayaa iska leh qoysaska Astrov, jinka Krestovnik. Waxaa jira noocyo badan oo ah cineraria, waxayna dhammaantood kala duwan yihiin midba midka kale muuqaalka. Waxaa jira ubaxyo geedo ah, geedo qurxoon. Dhammaan noocyada kala duwan waxay leeyihiin qaab kala duwan, midab iyo cabbir. Noocyada ugu caansan ee cineraria waa cineraria xarrago leh, cineraria dhiig ah iyo cineraria silver.
Talooyin ku saabsan abuurista iyo daryeelidda faashad
Primula - ubax ka soo jeeda qoysaska asaasiga ah. Tani waa warshad dilka ah, ubaxyada guga hore. In ka badan 500 nooc oo asalosus ah ayaa la og yahay in ay ku badan yihiin aagaga kala duwan: kaymaha, bannaanka, dhulalka buuraha, xaaladda ugu weyn ee qaybinta waa ciid qoyan oo hodan ah. Noocyada ugu caansan ee caleemaha cawska ah. Jardiinooyinka, noocyada isku dhafan ayaa badanaa la koray, mararka qaarkood duurjoogta.
Guryaha koraya ee guriga
Beerta Lavateru waxay jecel yihiin fududaynta. Ma baqdo dabaysha iyo qabowga, waxaa si fiican u dulqaatay qorrax xoog leh, abaaro. Haddii aad siiso xaalado caadi ah ee koritaanka, waxay ku dhufan kartaa keli ahaantiisa. Noocyada caanka ah iyo noocyo kala duwan oo laga soo iibsaday Dhirta ornamental waxay kala duwan tahay noocyada la soo bandhigay.
Noocyada qaboobaha sii kordhaya, sida loo koro Rose ka soo bouquet ah
Rose waa boqoradda ubaxyada. Ubax xoog leh leh caraf udgoon - waa hab weyn oo lagu farxi karo naftaada ama kuwa aad jeceshahay. Caleemaha ubaxyada ah ee beerta dhexdeeda marnaba lumiso quruxdiisa iyo qaab ciyaareedka ubaxyada kale. Waxay, sida astaan ​​u ah jacaylka, weynaanta iyo jilicsanaanta, waxay kugu dhiiri gelineysaa guulo cusub. Badanaa waxaad jeclaan lahayd inaad koraan ubax ka yimid ubaxyada lagu soo bandhigay qaraabada, qaraabadaada, asxaabtaada, laakiin ha ahaato sida aad u tijaabiso, gooyntaada lama aqbalo lana qalajiyo.
Badanaa balakoonnada, baddelada iyo meelaha banaanka ah waxaad ka heli kartaa ubaxyo xiiso leh - sida petunia, laakiin ma ahan "petunia". Sidaas, tani waa nooca petunia - Surfinia. Surfinia waa iskudhac ah xayawaanka nacnaca leh, kaas oo la yiraahdo jilayaal Japanese ah labaatan sano ka hor. Waxay kala duwanyihiin ubaxyo jilicsan, caleemo dhaadheer iyo xajistaan ​​xitaa roobka kadib.